Wararka Suuqa Maanta: Barcelona oo Xiiseeneysa Timo Wener, Heshiiska Sterling, Goo’anka Diogo Dalot iyo Qodobo | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Barcelona oo Xiiseeneysa Timo Wener, Heshiiska Sterling, Goo’anka Diogo...
Wararka Suuqa Maanta: Barcelona oo Xiiseeneysa Timo Wener, Heshiiska Sterling, Goo’anka Diogo Dalot iyo Qodobo
Barcelona ayaa xiisaynaysa weeraryahanka kooxda Chelsea ee Timo Werner waxaana la filayaa inay u dhaqaaqaan suuqa bisha January, 25 sano jirkaas ayaa kaliya afar kulan Premier League kusoo bilawday xilli ciyaareedkan. (Marca – in Spanish)
Manchester City ayaa iska caabin doonta bisha January xiisaha Barcelona uga imanaya xiddigeeda Raheem Sterling oo kaliya saddex kulan Premier League kusoo bilawday xilli ciyaareedkan. (ESPN)
Sterling ayaa u furan inuu heshiis amaah ah ugu wareego Barcelona (Times – subscription required)
City ayaa sidoo kale diyaar u ah inay bisha January markale tijaabiso kooxda Tottenham iyada oo dib u doonaysa Harry Kane oo ay suuqii xagaaga ku fashilantay saxeexiisa. (ESPN)
Leicester tababaraheeda Brendan Rodgers ayaa hoggaaminaya afar tababare oo Ole Gunnar Solskjaer ka bedeli kara Manchester United. (Mail)
England tababaraheeda Gareth Southgate ayaa ku dhaw inuu heshiis cusub oo uu sanadkii mushahar 5 Milyan oo pound ah ku qaadanayo saxeexo taas oo ka dhigan inuu ilaa Euro 2024 hoggaamin doono xulkaasi. (Telegraph – subscription required)
Xiddigii hore ee kooxaha AC Milan, Rangers iyo xulka Talyaaniga ee Gennaro Gattuso ayaan wali ka dhammaan kooxdaasi Rangers waxaana lala xidhiidhinayaa inuu Steven Gerrard bedeli doono. (Times – subscription required)
Chelsea garabkeeda Hakim Ziyech ayaa ku biiri kara Borussia Dortmund bisha January 18 bilood kaddib markii uu 33-ka Milyan ee pound ugu soo biiray Blues. (Mirror)
Sevilla ayay ka go’antahay inay ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan haysato daafaca dhexe ee Jules Kounde walow uu xiiso ka helayo Manchester United. (Marca – in Spanish)
Tottenham ayaa xiisaynaysa weeraryahanka Club Brugge ee Charles de Ketelaere balse waxay tartan 20 sano jirkaas ah kala kulmaysaa AC Milan. (Calciomercato – in Italian)
Wolves garabkeeda weerar ee Adama Traore ayay doonaysaa kooxda Valencia. (Sun)
Diogo Dalot ayaa rajaynaya inuu Man United sii joogo walow uu xiiso ka helayo Roma oo uu maamulo tababarihii Old Trafford keenay ee Jose Mourinho. (Caught Offside)
Dean Smith oo ay Aston Villa Axadii hore caydhisay ayaa la wareegaya kooxda Norwich City isaga oo kaga horreeya Frank Lampard. (Sun)
Dean Henderson ayaa doonaya inuu iskaga tago Man United kaddib markii uu booska goolhayaha dookha 1-aad kala bixi waayay David De Gea isaga oo xilli ciyaareedkan oo dhan 1 kulan ugu soo bilawday Red Devils (Mail)
Paulo Fonseca ayaan iska dhiibin riyadiisa ah inuu maamulo kooxaha Premier League walow uu waayay shaqooyinka Newcastle United iyo Tottenham. (Sun)
Previous articleDiogo Dalot oo ka hadlay go’ankiisa ku biiritaanka Roma iyo Mustaqbalka Manchester United
Next articleMohamed Salah oo Garoonka loogu soo galay Xili Masar bar-baro la gashay Xulka Angola, Natiijooyinka kulamada kale iyo Xulalka soo baxay
Granada 1-4 Real Madrid, Los Blancos oo la wareegtay hogaanka Horyaalka...
kooxda Real Madrid ayaa qabatay hogaanka Horyaalka Spain kadib guul ay ka gaartay kooxda Granada. Real Madrid ayaa 1-4 uga badisay kooxda Granada, Goolasha...
Xildhibaanada Jubbaland oo Senataro cusub ku doortay Kismaayo
Wararkii ugu dambeeyey xaaladda deg degga ah ee Itoobiya iyo duqeyn...
Dagaal xoogan oo ka qarxay Galgaduud iyo wararkii ugu dambeeyay
Barcelona oo dib u dhac kala kulantay wadahadaladii qandaraaska ee Dembele...
Xog: NISA oo diyaarado drone ah ku qabatay garoonka Muqdisho iyo...
Manchester United oo ku Dhawaaqday Tababaraha Cusub ee Kooxda Sida Ku...